China Beanie & Knits mpanamboatra sy mpamatsy | Wenchang
Fitaovana fanatanjahan-tena sy fialamboly
Slipper & slide
Tavoahangy Beanie & Knitted
Karazan-doko amin'ny ririnina: Beanie
Fabirc Feature: mahazatra
Fotoana fanaterana: 10-25 andro fiasana
Volavola: Volavola namboarina
Fotoana santionany: 3-5 andro ho an'ny fomba mahazatra
Fitaovana: akrilika 100%
Size: 58cm na haben'ny mahazatra
Serivisy: OEM / ODM / Design
Sahirana ny olona manampy palitao matevina amin'ny palitaony. Ankehitriny, tsy tokony hatao ambanin-javatra ny kojakoja mafana.
Toy ny satroka volon'ondry, isaky ny ririnina dia mividy Beanie ny olona, ​​satria ny loha dia tena manandanja mba hafana hatrany. Ary ny lamaody volon'ondry Beanie satroka sy diplaoma azo ampiharina dia avo dia avo.
Zazavavy kely, manao satroka akanjo ba ambonimbony kokoa, ny olona iray manontolo toa be lava, avo be koa ny fanahy.
Manaova palitao miloko tsotra kokoa amin'ny vanim-potoana mahazatra, ampifanaraho amin'ny volon'ondry volom-borona knit, mijery manana tanjaka maro, miseho tsy dia miovaova loatra. Mahatsiaro ho matotra somary matotra, manaova satroka volon'ondry MAO Qiu, misehoa mahafinaritra be dia be, mampihena ny vokan'ny taona hanampiana cent.
Ary miaraka amin'ireo tovovavy maro be mandoko ny volon'izy ireo amin'izao fotoana izao, ny fanaovana satroka Knit dia afaka manampy anao handalo ilay fotoana mahasosotra rehefa maniry ny volo mainty alohan'ny ahafahana mandoko. Lazao mangingina, tsy nanam-potoana nanasana ny volon'ilay zazavavy, ny fanaovana satroka Knit dia mety manarona kilema ihany koa.
Raha fintinina, ny ririnina dia tsy maintsy manana volon-koditra vitsivitsy, afaka mitazona mafana, lamaody maoderina volon'ondry baoty vita amin'ny volonondry akaikin'ny vatana.
Loko ho an'ny safidinao
SHANGHAI ALLSOURCING dia mpamatsy sy mpanondrana matihanina ary mpanafatra vokatra Knit hat, ary kojakoja fialamboly, Manampy ny mpanjifantsika mitady ny lamaody Beanie manerana an'i Shina rehetra izahay.
Ny orinasan'ny orinasa dia nanomboka ny taona 2006 avy amin'i Simon sy Karen mpivady, izy ireo dia niasa tao amin'ity faritra ity sahabo ho 15 taona sahady.
Allsourcing dia afaka manome ny lamaody Beanie & Knit lamaody, ny fahaizan'ny Allsourcing miavaka hamolavola sy handika ny fironana lamaody sy ny entana ho an'ny kaonty sy ny vidin'ny tsena rehetra ahafahantsika mivoatra ho an'ny mpanjifa isan-karazany. Ny orinasa dia manana mpizara orinasa mihoatra ny 500. Ity dia afaka manome antsika fahaizana manome serivisy tsara ho an'ny mpanjifa manerantany.
Address: Huguang East Road 89, Distrikan'i Minhang, Shanghai, Sina.
Manaraka: Fedora Hat
Knit Hat miaraka amin'ny molotra
Knit Hat miaraka amin'i Pom Pom
Knit Hat miaraka amin'ny lavaka Ponytail
Satroka baoty ho an'ny zazakely
Tenona Santa Hat
Loom Knitting Hat ho an'ny vao manomboka
Satroka Nfl Knit
Huguang East Road 89, Distrikan'i Minhang, Shanghai, Sina
Inona no fomba tsara indrindra hanaovana satroka baseball
Inona no fomba tsara indrindra anaovana satroka fisaka